ချောအိမာန် (မန္တလေး): July 2010
သူမအတွက် မထင်မှတ်ဘဲ နေသာတဲ့တစ်နေ့က…နေရာလေးတစ်နေရာကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမ မမျှော်လင့်ထားတာမို့ ထူးပြီးခံစားမှုကြိုပြီးမရှိခဲ့ပေမယ့် အဲဒီအိမ်ရှေ့ရပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ မြန်မာဆန်လွန်းတဲ့ သစ်သားအိမ်ခပ်ဟောင်းဟောင်း၊ အပင်ရှည်များက သစ်သားအိမ်ဟောင်းကို တစ်ဝက်လောက်ထိ ဖုံးလွှမ်းထားတယ်။ တံခါးနဲ့ အိမ်ကြားမှာ သစ်သားခင်းတံတားလေးကို ဖြတ်ကျော်ရင်း… အိမ်လေးထဲရောက်တော့ ထိုင်စရာ ပက်လက်ကုလားထိုင်တစ်လုံးကလွဲပြီး အခြားပရိဘောဂ ဘာအဆောင်အယောင်မှ မတွေ့ရဘူး။ တံခါးရဲ့အပြင်မှာ ဖိနပ်နဲ့ရှိသမျှ အဆောင်အယောင်တို့ကို ချွတ်ခဲ့ရပြီး အိမ်လေးထဲကို လှမ်းဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ပထမ ဦးဆုံးရရှိတဲ့ခံစားမှုက ဆေးနံ့၊ နောက်ပြီး ရယ်မောလွတ်လပ်နေသော တစ်စုံတစ်ဦး၊ သူကိုယ်တိုင်ကြမ်းပြင်မှာ ထိုင်ရင်း…. သူစကားပြောဟန်လေသံတို့က သူမအာရုံကို ဝင်စားသွားစေခဲ့တယ်။ ဟန်ဆောင်မှုမရှိတဲ့ သူ့ထံကို လာသူများဟာ ဘာကောင်ညာကောင်မှ မဟုတ်တော့ဘဲ အမျိုးအစားက တစ်မျိုးတည်းဖြစ်သွားရတယ်..။ အိမ်တံခါး ခပ်ရွဲ့ရွဲ့လေးကိုတောင် မချန်ဘဲဆေးခြစ်ရာတွေတွေ့ရတယ်။ အိမ်ခန်းလေးထဲမှာ စာအုပ်များ၊ ဆေးဘူးများ၊ စုတ်တံများ၊ ဘောင်ကြက်ထားတဲ့ ကင်းဗတ်တွေ၊ မပြီးသေးတဲ့ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ပန်းချီကားများ… တချို့ကားတွေကိုတော့ သူမဉာဏ်အရ နားမလည်နိုင်သေးပါ။ သို့သော် ထိုလက်ရာပန်းချီကားများကိုတော့ လူတိုင်းလိုချင် နှစ်သက်တယ်ဆိုတာ ကိုတော့ သူမသိတယ်။ သူမ မိတ်ဆွေများက ဟိုကားလိုချင်၊ ဒီကားလိုချင်နဲ့ ``ဒီပန်းချီကားသိပ်ကောင်းတာပဲ`` လို့ပြောရင် ဘာမှမပြီးသေးဘူး၊ ကြိုက်ရင်ယူသွားလို့ ရက်ရက်ရောရောပေးတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဟန်ကိုဆွဲထားတဲ့ပုံတွေကိုတော့ သူမခံစားနိုင်တယ်။ သူမမိတ်ဆွေက ပန်းချီကားကို အကာမရှိတဲ့ အခန်းအတွင်းထဲအထိဝင်ပြီးရှာဖွေတယ်။ ခရမ်းရောင်ပြေပြေ ဦးဘသက် ပန်းချီကားကို တွေ့လို့ဝယ်လိုက်ပြီး ဆိုင်းထိုးပေးဖို့ပြောတော့ ``ကိုယ့်ဘာသာထိုးလိုက်လည်း ရတာပဲဟေ့ဟေ့`` ဆိုပြီး အနက်ရောင်စုတ်တံနဲ့ သူဆိုင်းထိုးပေးတယ်။ ရှေ့ကစားပွဲခုံပုလေးပေါ်မှာ လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ရှိတယ်။ အေးပြီးအမြှေးတက်နေပြီဖြစ်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ဟာ သူမတို့လာတော့ ပိုအေးစက်သွားတယ်။ ထိုသူက ပန်းချီအကြောင်းတွေကို အခန်းပြည့်ပြောနေရတယ်လေ… ဧည့်ဝတ်ကျေဖို့အတွက် လက်ဖက်ရည် သူမတို့ကို တိုက်ချင်တယ်။ လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ထက် ပန်းချီကားတွေနဲ့ ထိုသူ့အပေါ်ကိုသာ အာရုံရောက်နေတယ်။ သူမ ထိုင်နေတဲ့နားမှာ ကက်စက်အိုလေး တစ်လုံးရှိတယ်။ ဂန္တဝင်ဂီတတွေကို မိုးလင်း၊ မိုးချုပ် နားထောင်တယ်လို့ သိရတယ်။ သီချင်း၊ ဂီတတွေနားထောင်ရင်း လွတ်လပ်စွာနဲ့ ပန်းချီတွေကို ဆွဲနေပုံရတယ်….။လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က လေဖြတ်သွားတာမို့ လက်နဲ့ခြေလှုပ်ရှားမှုနည်းပြီး ကျန်းမာရေးအားနည်းခဲ့တယ်။ သို့ပေမယ့် သူ့ရဲ့အပြုံးနဲ့ စကားသံတွေကတော့ အိမ်လေးထဲမှာ သွက်နေခဲ့တယ်။ မျက်စိတွေ ခွဲစိတ်ခံရပြီးမှ ကြည့်ကောင်းလာ ပြီး အရောင်တွေ သိပ်လှကြောင်း တခုတ်တရ ပြောဆိုတယ်။ ပန်းချီပစ္စည်းများ၊ အခြားနှစ်သက်သော ပစ္စည်းအနည်းစုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသလို ထိုသူ့ရင်ထဲမှာလည်း ပြောစရာ စကားများနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ်လို့ထင်တယ်..။ ဘာဖြစ်လို့လဲ လွတ်လပ်သူတစ်ယောက်ဟာ လွတ်လပ်စွာနဲ့ သူ့အနုပညာတွေအကြောင်း အပြည့်အဝပြောနေခဲ့တာပဲ… ။``မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အလကားလိုချင်တာများတယ်။ အမှတ်တရ သိမ်းထားချင်လို့ ပန်းချီကားတစ်ခုပေးပါပေါ့။ နိုင်ငံခြားမှာ လူပုံတွေဆိုလိုချင်ကြသေးတယ်။ မြန်မာတွေက ပုံဆို ကိုယ့်ပုံကို ပိုလိုချင်တယ်။ မော်ဒန်ဆိုတာ ပြီးခဲ့တဲ့ Century က လူတွေစလုပ်တာပါ။ အဲဒီကတေန ပန်းချီဆွဲတာကို modern movement လို့ခေါ်လိုက်တာပဲ``။ ``ဦးဘသက်ကို သဘော ကျတယ်။ မွဲလည်းမွဲတယ်၊ ဟုတ်လည်း ဟုတ်တယ်၊ မြန်မာပြည်မှာ အကောင်းဆုံးဟေ့… artist ကိုးဟာ.. သူဆွဲရင်လွယ်တယ်၊ ကိုယ်ဆွဲရင် ခက်တယ်``။``ဘယ်ဟာကိုမှ copy မလုပ်၊ မလုပ်တက်တာ၊ လုပ်လည်း မလုပ်ဘူး``။ ``Dubliners မူရင်းဖတ်ရတာ သိပ်ကောင်းတယ်။ ကမျူးကို ကြိုက်တယ်။ ဟိုတစ်ယောက်(ယန်းပေါဆတ်) ကို မဖတ်ဘူး။````ကျူဗင်ဇင် ဆန်ဆန်မျိုး အရင်တုန်းက ဆွဲတယ်။ အခု မလုပ်တာကို ဘာဖြစ်လို့လဲမမေးနဲ့လေ၊ ဟုတ်တယ်လေ.. မုန့်ဟင်းခါးရောင်းတဲ့သူကို လက်သုပ်ဘာဖြစ်လို့ မရောင်းတာလဲ မမေးနဲ့၊ မသိဘူးလေ ခုမုန့်ဟင်းခါးရောင်း နေတာပဲမမေးနဲ့````ကြိုက်တဲ့ကားယူ သွားဟေ့… ဟေ့ ကုန်ပြီ.. ကုန်ပြီ``။ထိုအိမ်လေးမှ လွတ်လပ်စွာထွက်ပေါ်လာသော အသံများ ထိုသူကို တချို့က တစ္ဆေများနဲ့ နေထိုင်သူတဲ့..။စိတ်၊ ဝိညာဉ်တွေ နှစ်ဆွဲထားတဲ့ ``ကိုကော့ရှ်``ကားကသူ၏ အကောင်းဆုံးလက်ရာတဲ့။ စန္ဒရားသံက ထိုသူနဲ့အတူအမြဲရှိနေတက်တယ်။ ခါးထောင်အင်္ကျီ ကော့ကော့နဲ့ ထိုင်နေတသော ကချေသည် ပုံတွေက လူပြောများတယ်။ Abstract ပန်းချီကောင်းပြီဆိုရင် ဘယ်သူမှ လိုက်မမီအောင် ကောင်းတယ်တဲ့။ လွတ်လပ်အေးချမ်းစွာ ပန်းချီဆွဲနေရတာက သူ၏ ကမ္ဘာတစ်ခုလိုပင်…။ သူမမိတ်ဆွေက ဝယ်လိုက်သော ပန်းချီကားအတွက် ကန်တော့ငွေကို သူ့ရဲ့ဘီစကစ်လေးထောင့်ပုံးဟောင်းထဲကို ထည့်လိုက်တယ်။ အဲဒီပုံးထဲက ငွေစက္ကူကိုလည်း စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံမပေါ်၊ ရယ်မောပျော်ရွှင်နေသော သူ့အသွင်သဏ္ဍာန်ဟာ ထူးခြားနေတဲ့ သူတစ်ယောက်လို ခံစားမိတယ်။အသားဖြူဖြူ ဥပဓိရုပ်ကောင်းတဲ့ သူဖြစ်သလို ၊ ငယ်စဉ်က အတော်ချောမှာပဲလို့ မှတ်ချက်ချမိတယ်။ သူ့ရဲ့ အက်ဆေးတစ်ပုဒ်ပါတဲ့ သူမတို့မဂ္ဂဇင်းကို ပေးလိုက်တော့ ``ဟာ စာရွက်ကောင်းတွေ အတော်ကုန်မှာပဲ`` လို့ပြောတယ်။……………..သူက အင်္ဂလိပ်ကပြားဆိုတာသိရတော့ အံ့သြစရာ၊ အဖေက မြန်မာပြည်ကိုရောက်လာတဲ့ အင်္ဂလိပ်၊ အင်္ဂလန်မှာနေတာ။ အမေကတော့ သာယာကုန်းသူ… အင်းလျားလမ်းမှာ ကြီးခဲ့သူ၊ တိုက်ခန်းတွေမှာနေချင်သူ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကိုလည်း ၊ ဝါသနာပါသူ။ တီတီစီမှာ ၆ တန်း အထိ ပြင်ဦးလွင်က စိန်မိုက်ကယ်ကျောင်းမှာ၊ စစ်ကြီးပြီးမှ ကျောင်းစနေသတဲ့။ စစ်လည်း ပြေးဖူးတယ်။ ၁၀တန်းအောင်တော့ ရန်ကင်း ၁ ၊ Main မှာ ၁ နှစ် ၂ နှစ်၊ ဘီအိုစီ ကျောင်းအသစ်ကြီးမှာလည်း ပျော်မွေ့ခဲ့ဖူးတယ်၊ ၁၀ တန်းအောင်တော့ architect စဖွင့်တယ်၊ ပန်းချီဝါသနာပါတော့ ဦးပေါ်ဦးသက်တို့နဲ့ ဆုံတယ်။ မိတ်ဆွေတွေလည်း အများကြီး။ ကင်းဗတ်မရှိလို့ သုံးထပ်သားပေါ်မှာ အဝတ်အမာစတွေနဲ့ ရေးတယ်။ ပန်းချီကားတစ်ကား ရောင်းရငွေ တစ်ရာ၊ တစ်ရာ့ နှစ်ဆယ်ဟာ အများဆုံးရတယ်။ သုံးရာဈေးမတင်ရဲဘူး၊ မဝယ်မှာ စိုးလို့။ ပန်းချီနဲ့ ပတ်သက်ရင် အကုန်လေ့လာတယ်။ မှတ်တယ်။ ဗန်ဂိုး၊ ဂေါ်ဂင်၊ မနေးတို့ကို လေ့လာတယ်။ ပန်းချီကားရောင်းပြီး ထမင်းစားတယ်။ တကယ့်လွတ်လပ်မှုကို ခုံမင်ပြီး မလုပ်ချင်တာကို မလုပ်ဘူး၊ မပြောချင်တာကို မပြောဘူး၊ မဆွဲချင်တာကို မဆွဲဘူး၊ မနေချင်တဲ့ဘ၀ပုံစံမနေဘူး၊ နေပုံ၊ ထိုင်ပုံ၊ လှုပ်ရှားပုံ၊ စကားပြောဟန် တွေက ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ရုပ်ပုံကားချပ်တွေကို ပိုပီပြင်ထင်ရှားစေတယ်။ ထိုသူရဲ့ ကမ္ဘာလေးမှာ မိုးဇက်နဲ့ ဘီသိုဗင် တေးသွားတွေလည်း ပျံ့လွင့်နေနိုင်တယ်။ ပန်းချီကား တစ်ကားကို လာမဝယ်ခင်ချိန်ထိ၊ တောင်းမယ့်သူမရှိခင် ချိန်ထိ စိတ်တိုင်းကျ စိတ်ပါသလောက်ပြင်ဆင်မယ်။ သတ်မှတ်ချက်တွေ ကင်းလွတ်တဲ့ ပန်းချီတွေကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။ ပန်းချီကားမှာ ဘောင်တွေရှိပေမယ့် ပန်းချီရေးသူရဲ့ စိတ်ကတော့ အကန့်အသတ်အချုပ်အချယ်မခံတက်သူ။ အလွတ်လပ်ဆုံးလူသား တစ်ဦးအဖြစ် ကိုယ်စိတ်ထဲရှိတာကို ရေးချနေတဲ့၊ အလုပ်ကသာ ပန်းချီအတွက် အရေးကြီးဆုံးလို့ ယူဆသူ။ ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင် အကြောင်းအရာတွေကအများကြီး။ ဒီသစ်သားအိမ်ဟောင်းလေးထဲမှာ မီးလာရင် တေးသွားတစ်ခုကို နားဆင်ရင်း ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပိုင်စွာ စုတ်ချက်တွေကို လွတ်လပ်စွာရေးဆွဲ နေတဲ့ သူ့ရဲ့ ကမ္ဘာဟာ ဘယ်လောက်ထိ အိပ်မက်တစ်ခုဆန်လဲ။ တွေ့ချင်သူများက လာရောက်တွေ့ဆုံးပြီး ခုလိုနေထိုင်မှုပုံစံကပင် သူ့အတွက်ပျော်ရွှင်မှုရနေသလိုပင်.. ဒီနေရာမှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ နေထိုင်မှု Life style ဟာ ဧည့်ခန်း၊ ဆိုဖာဆက်တီ ခမ်းနားထည်ဝါခြင်းအပြည့်အစုံနဲ့ မဆိုင်ဘဲ..စိတ်တို့၏ အချုပ်အတည်းကင်းမဲ့ရာ…လွတ်လပ်ခြင်းကိုအပြည့်အဝခံစားရရှိနိုင်ရာ……စိတ်မွန်းကျပ်မှုတို့၏ လွတ်မြောက်ရာ…သူ၏ ကမ္ဘာလေးမှာ ထိုသူကို ငြိမ်းချမ်းစွာ တွေ့ရတာကိုကပင် သူမစိတ်ထဲ ကျေနပ်နှစ်သက်ခဲ့မိပါတော့တယ်။ ပန်းချီဆရာကြီး ဦးခင်မောင်ရင်အတွက် အမှတ်တရချောအိမာန် (မန္တလေး)
( ၁ ) လုံခြုံမှုမရှိနေသလို … ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ဆောက်တည်ရာမဲ့ လွင့်မျှောနေတယ် … ကြွေလိုက်စမ်းပါ ကြယ်တွေ တက်လာလိုက်စမ်းပါ ဒီရေတွေ .. ပျံသန်းသွားကြပါငှက်တွေ ……. ဒီအချိန်မှာ ဒီသဘာဝတရားတွေကို ကြည့်ပြီး ခံစားနိုင်တဲ့အင်အား ကျွန်တော့မှာ မရှိတော့ပူး ….. ဒီမယ်ဇယ်ပင်တန်းအောက်က ထိုင်ခုံတွေ ဦးပိန်တံတားရဲ့ ခြေထောက်တွေ …… မုန့်နံ့ ၊အကြော်နံ့ တသင်းသင်းရနေတဲ့ ဆိုင်အခင်းအကျင်းတွေ … ကင်မရာကို ဘယ်လှည့်ညာလှည့်နဲ့ ခရီးသွားဧည့်သည်တွေ ……တံတားပေါ်က…..လှောင်အိမ်ထဲက မျက်လုံးပြူး ဇီးကွက်လေးတွေ …. ငှက်တွေ ….. အဝေရာပုတီးဆွဲကြိုးလေးတွေ ကိုင်ပြီး နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေကို No expensive လို့ ထပ်ခါထပ်ခါ လိုက်ပြောနေတဲ့ ထမိန်တိုတို တောသူလေးတွေ …….လက်ချင်းချိတ်ပြီး ငှက်စီးနေကြတဲ့ စုံတွဲလေးတွေ ….. နေ၀င်ချိန် Sunset ကို အမိအရ နောက်ခံထား ဓါတ်ပုံရိုက်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေ မိသားစုတွေ ….. ဒါတွေအားလုံး ကျွန်တော့အာရုံမှာ ဖမ်းထားတဲ့ ပုံရိပ်တွေပါပဲ ………. ခုတော့ ကျွန်တော် မယ်ဇယ်ပင်တန်း အောက်က ခုံတစ်ခုမှာ ထိုင်နေပါတယ် ….. ဒါပေမဲ့ အတွေးပုံရိပ်တွေကတော့ အရင်နဲ့မတူ …. ကျွန်တော့ရှေ့က အကြော်တစ်ပွဲက အေးစက်နေပြီ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကလည်း ထိုနည်းတူစွာ ……..ကျွန်တော်ကဗျာတွေမရေးနိုင်ပါ … ၀တ္ထုတွေ မတွေးနိုင်ပါ ……အလုပ်လည်း မလုပ်နိုင်ပါ … ဘာလုပ်သင့်သလဲအဖြေကို အထပ်ထပ် အခါခါ စဉ်းစားတယ် … ပေါ်မလာ …. နောက်ဆုံး ဒီနေရာမှာပဲ လာထိုင်နေမိတော့တယ် ….. ကျွန်တော်……ပေါက်ကွဲသင့်ပြီလား ….စဉ်းစားမိတယ် …. တစ်ကယ်ဆို ကျွန်တော့စိတ်က ပေါက်ကွဲချင်နေပြီ ..ကျွန်တော် မေမေ့ကို တောင်းပန်ချင်တယ် … မေမေ ဘာဖြစ်လို့….လဲ! ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ ….အကြိမ်ကြိမ် ရင်ထဲမှာ အော်ဟစ်ခဲ့ပြီးပြီ…. ကျွန်တော်တို့ကို အသက်ရှူကျပ်တဲ့နည်းနဲ့ ရှင်သန်ခွင့်မပေးပါနဲ့ …… မေမေ့ကို မှားနေတယ်လို့ လက်ညှိုးမထိုးချင်ပေမယ့် … မေမေ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ လမ်းတွေက မမှန်ခဲ့ဘူး ….ကျွန်တော်တို့ကြောင့်လို့မပြောပါနဲ့မေမေ …ကျွန်တော် တောင်းပန်ပါတယ် .. သူများအပြောတွေအောက် ကိုယ်လွတ်ရုန်းထွက်နိုင်အောင် …. အင်အားမရှိနိုင်တော့ဘူး မေမေ ….. အဲဒါကို ကျွန်တော် ၀မ်းအနည်းဆုံးပဲ …ကျွန်တော် မေမေ့လုပ်ရပ်တွေကို ဘယ်လို ဥပေကာပြုရမလဲ … ကျွန်တော့်ကို မေမေ မယုံကြည်သလို …မေမေ့ကိုလည်း ကျွန်တော် မယုံကြည်တော့ဘူး …. ဂဏန်းနီနီရဲရဲတွေ အကြော်ခံပြီး ဘန်းထဲမှာ နေပူလှန်းခံထားရသလို ရင်ထဲမှာ ကြွတ်ကြွတ်ရွနေတယ် ….ရုရှိုက်ရတဲ့ ရနံ့ဟာ ……လေကိုဖြတ်လာပေမဲ့ မသန့်စင်ဘူး …. ဖုန်မှုန့်တွေ ပါလာသလို နှာခေါင်းဝမှာ ယားကျိကျိနိုင်လှတယ် … ဒီကြားထဲ စားပွဲပေါ်က အချဉ်ရည်ခွက်ထဲ ဘတ်ကနဲပြုတ်ကျလာတဲ့ ငှက်ချီလာတဲ့ အသီးခြောက်တစ်ခုကြောင့် … ကျွန်တော့ အကျီင်္ဖြူလေးမှာ …… အစက်နှစ်စက်လောက်စင်သွားတယ် …ရှိစေတော့……….ကျွန်တော်မသုတ်တော့ဘူး ….ကျွန်တော့ရင်ဘတ်ထဲမှာ ဒီထက်ညစ်ပတ်နေတဲ့ သမိုင်းတွေ ရှိနေခဲ့ပြီပဲ ဒါကို သုတ်လိုက်လို့ သန့်စင်သွားမှာမှ မဟုတ်တာ …မဟုတ်ဘူးလား မေမေ…………. မေမေ ကျွန်တော်တို့ ရင့်ကျက်မှုကို ဥပေကာပြုထားတယ်…..ငယ်ငယ်တုန်းးကတော့ သားဒီမုန့်ကောင်းတယ် စားဆို …ကျွန်တော်စားမယ် ……သား ဒီလမ်းမသွားနဲ့ဆို ကျွန်တော်မသွားဘူး ……..မေမေက မကြိုက်ဘူးဆိုရင် …ကျွန်တော်မစူးစမ်းဘူး …. သိဖို့မကြိုးစားဘူး …မေမေ ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်ကို ဘာတွေသင်ပေးခဲ့လဲ …. ကျောင်းစာကိုကျောင်းမှာသင်ခဲ့ရပေမဲ့ ……….. ကျွန်တော့ ဖေဖေတော့ … မေမေ သိပ်ကိုမုန်းတဲ့ လူဆိုးကြီးတစ်ယောက်ပေါ့ …… ..မေမေပြောတဲ့ ရက်စက်တယ် ၊ ကြမ်းကြုတ်တယ် ၊ ကြင်နာမှု့ခေါင်းပါးတယ်၊အတ္တကြီးတယ် ၊လောဘကြီးတယ် ………မေမေ သင်ခန်းစာတွေထဲမှာ ဖေဖေကို မုန်းတီးခြင်း သင်္ကေတ သင်ခန်းစာတွေ ပြည့်နှက်နေတယ်……..ကျွန်တော်ထင်တယ် ဖေဖေရဲ့ စိတ် တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ …..ဖေဖေဟာ မေမေပြောသလောက် ဆိုးမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ တွေးမိတယ် ………. ဖေဖေကရော မေမေ့ ကို ဘယ်လိုထင်မလဲ ……….. ဖေဖေနဲ့ မေမေဟာ မရေရာခြင်းတွေနဲ့ ……….. အတွင်းပိုင်းတွေ လှိူက်စားလောင်မြိုက်နေခဲ့တာ …..ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး .. ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်မှာဘဲ …. လမ်းခွဲခဲ့ကြတယ် ….. မေမေက ကလေးတွေ မျက်နှာမကြည့်သလို …ဖေဖေကလည်း ကျွန်တော်တို့ကို မငဲ့ကွက်ခဲ့ဘူး………. ဘယ်သူများလဲလို့ မဝေဖန်နိုင်ပေမဲ့ … သိသာစွာ ချို့တဲ့သွားတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ပါ ………ကျွန်တော်တို့ နားခို နေတဲ့အရိပ်တစ်ခု ချက်ခြင်း ပျောက်သွားတော့………….. နေရဲ့အပူဟာ ပိုသိသာလာပါတယ် … ညီမလေးကဆို ပိုဆိုးတယ် ဖေချစ်ကိုး……….. မေမေက ကျွန်တော်တို့ကို ကျောင်းပြီးရင် အလုပ်လုပ် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးဖို့ပြောတယ် … ကျွန်တော်ကျောင်းပြီးသွားပေမဲ့ မရေရာခြင်း လမ်းစမှာဘဲ လမ်းပျောက်နေတယ် ……….ကျွန်တော် ရတဲ့ဘွဲ့နဲ့ လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကလည်း တခြားစီ…… ကွန်ပျူတာမှာ ညပိုင်း ဆရာလုပ်ဖြစ်တယ်……. ကျန်အားတဲ့အချိန် ၀ါသနာပါတဲ့ စာရေးတယ် …… စာအုပ်အငှားဆိုင်တွေအတွက် စာအုပ်ချုပ်ပေးတယ်…..လိုအပ်ရင်ဝယ်ပေးတယ် ကိုယ်လည်းဖတ်ရတယ်…..ညီမလေးက ဆယ်တန်းနှစ်ခါကျပြီးမှ အောင်တယ် …. သူ့ကိုအနီးကပ် ကြည့်ရှု့ရတာ ကျွန်တော် …..မေမေနဲ့ ကျွန်တော်လည်းမနီးစပ်ဘူး …….. မေမေ ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကို စောစောပိုင်းကတည်းက သိပေမယ့် ကျွန်တော် မပြောရက်သေးဘူး ……. မေမေက Super Market Centre တစ်ခုမှာ ……. ဆိုင်ခန်းငှားပြီး ဆံညှပ် ၊ အလှပြင်ဆိုင်ဖွင့်တယ် ….. အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး လက်ခံတယ် …. ဒါပေမယ့် မေမေ့ဆိုင်မှာ အမျိုးသားများတယ်လို့ ပြောကြတယ် ….ကျွန်တော် ဆိုင်ကိုတစ်ခေါက်မှ မသွားဘူး … ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ ဆိုင်ခန်း က အရမ်ေးဈေးကြီးတာတဲ့ …… မေမေ ဘယ်ကငွေနဲ့ ငှားထားလည်း ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး……… နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပြောလွန်းမက ပြောလာတော့ ကျွန်တော့နား အခါခါ ရောက်လာတယ် ……….. နင့်အမေ ဘော့စ်တစ်ယောက်နဲ့တွဲနေတယ် ….. ခုဆိုင်တောင် အဲဒီသူဌေးက ၀ယ်ပေးထားတာ …. နင်တို့ မသိဘူးလား …. ပြန်လာရင် အဲဒီသူဌေးက လမ်းထိပ်ထိလိုက်ပို့တာ … လက်ထပ်ထားတယ်ဆို…….အဲဒီလူက လူပျိုကြီးလား …………. တစ်ချို့ က အိမ်ထောင်ရှိတယ်ဆို ….စတဲ့ အမျိုးမျိုး ဝေဖန်ခြင်းတွေအပေါ် ကျွန်တော် မယုံတတ်ဘဲ ရှိနေခဲ့သေးတယ် ……သေချာတဲ့မေမေ့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုက တစ်ကိုယ်ရည် ပြင်ဆင်မှုမှာ ပတ်ဝန်းကျင် သတိထားမိလာအောင် ဖြစ်လာတယ် ….. အလှပြင်ဆိုင်ဖြစ်ပေမယ့် မေမေရဲ့ အ၀တ်အစားတွေ ပစ္စည်းတွေက မယုံသင်္ကာစရာဖြစ်လာပြီ …. မေမေ ကျေနပ်ပီတိတွေဖြစ်ပေမယ့် …….ကျွန်တော်ကတော့ တော်တော်ခါးသက်လာပြီ……….အချိန်ကြာကြာ မပေးလိုက်ရပါဘူး …. ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ပြောစကားတွေ တစ်ခုမမှားဘူး…………. ကျွန်တော်ရှက်တယ် ……အဲဒီ အပြင်အဆင်တွေနဲ့ မေမေ့ကို မတွေ့ချင်ဘူး ……ဘာမှလဲ ထပ်မသိချင်တော့ဘူး……… ဟူး……………ကျွန်တော် စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ခုံအောက်ဝင်ပြီး ခေါင်းထိုးအိပ်နေတဲ့ ခွေးကို ခြေထောက်နဲ့ကန်လိုက်မိတယ်…..နေလုံးကအနောက်ဘက်ဆီကနေတဖြည်းဖြည်း ၀င်ရောက်ပျောက်ကွယ်လုနီးနေပြီ……. ပြန်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်စဉ်မှာဘဲ….. အသံတစ်ခုကြောင့် တစ်ဖက်ဆိုင်ကို ကြည့်လိုက်မိတယ်… မိန်းကလေးသုံးယောက် ကျောပေးထိုင်နေတာ ကျွန်တော့်ညီမ မိုးဖြူသဲ ……. ဘယ်လိုလုပ် ဒီရောက်နေပါလိမ့်… တက္ကသိုလ်ကျောင်းကနေ အိမ်မပြန်သေးတာဘဲ ဖြစ်ရမယ်…. ကျွန်တော်နေရာမှာ အသာပြန်ထိုင်လိုက်တယ်… သူတို့ သုံးယောက်ထဲက တစ်ယောက်က အိတ်ထဲကနေ ဘီယာပုလင်းကို ထုတ်လိုက်တယ်… ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေ ပြူးသွားတယ်… ကျွန်တော်တောင် မသောက်တာ သူတို့က… အကြော်တစ်ပွဲ လှမ်းမှာတယ်… မကြာစေနဲ့ မြန်မြန်လေးလို့ ကျွန်တော့်ညီမက ဖြည့်စွက်အော်ပြောတယ်… အကြမ်းပန်းကန်ထဲ ဘီယာတွေထည့်တယ်… ဟိုးဘက်ဆိုင်က သောက်မကောင်းလို့ ဒီဘက်ဆိုင်ကို ပြောင်းလာတာလို့ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်က စားပွဲထိုးလေးကို ပြောတယ်… ရုပ်လေးတွေကြည့်တော့ စာကြမ်းပိုးရုပ်… ရပ်ကွက်ထဲမှာဆို ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိပုံစံ… ခုတော့ လူမြင်ကွင်း မိန်းကလေးကျောင်းသူဖြစ်ပြီး ဘီယာ လာသောက်နေတယ်… ကျွန်တော်ဆိုင်က စားပွဲထိုးကိုလှမ်းခေါ်ပြီး အဲဒီလို မိန်းကလေးတွေ လာသောက်တတ်လားမေးတော့… လာတတ်တယ်တဲ့… တစ်ခါတုန်းက ကောင်မလေး နှစ်ယောက်မူးပြီး ဆံပင်ဆွဲ ရန်ဖြစ်ကြတာ… ကောင်လေးတွေက ဖြေပေးရတယ်…. တဲ့… ကျွန်တော်ခေါင်းတွေ ပိုကိုက်လာတယ်… လက်သီးတွေ ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ပြီး… ခြေလှမ်းတွေက ထိန်းလို့မရအောင် မြန်ဆန်လာတယ်… “ မိမိုး “ ကျွန်တော့် အော်သံကြောင့် သူတို့သုံးယောက်လုံး ပျာယာခတ်သွားတယ်… မိမိုးရှေ့က ခွက်ကို ပစ်ပေါက်ပစ်လိုက်တယ်…. လက်ဆွဲခေါ်လာချိန်မှာ မိမိုးကငိုနေပြီ… နင့်ကိုငါ သတ်တောင်ပစ်ချင်နေပြီ… အိမ်ရောက်တော့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲက အခံဒေါသတွေနဲ့ပေါင်းပြီး… မိမိုးကို ရိုက်ပစ်လိုက်တယ်… မေမေပြန်လာတော့ အံ့သြရင်း… ကျွန်တော့်ကိုဆူတယ် ….. သူ့သမီးကို ဒီလောက်ရိုက်ထားလို့တဲ့…. “ မေမေ့မှာ တွေးတောဆင်ခြေမှုဆိုတာ ရှိသေးရဲ့လား… ဒီလိုမှ မဆုံးမရင်… ပျက်စီးသွားမယ် အဲဒါကို မေမေ လက်ခံနိုင်လား…. သူများတွေပြောကြမှာကို မေမေ မရှက်ဘူးလား … ကျွန်တော်တို့ကို မေမေ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ အုပ်ချုပ်လာခဲ့ ထိန်းသိမ်းလာခဲ့သလဲ… ပြန်တွေးကြည့်ပါအုံး… ကျွန်တော့်မှာ ကိုယ်ပိုင် အသိစိတ်လေးရှိလို့ ခံသာနေတာ… မိမိုးတို့လို လူငယ်တွေက ပျက်စီးမှာပဲ… အဲဒီလိုဖြစ်ရင် သူ့အဲဒီလိုဖြစ်ရင် သူ့အပြစ်မဟုတ်ဘူး… မေမေ့ကြောင့်… ကိုယ့်အိမ်ကို အပေါ်က အုပ်မိုးထားတဲ့ ခေါင်တစ်ခုလုံး မလုံမှတော့… ဧည့်ခန်းလည်း ပျက်စီးမှာပဲ… မီးဖိုချောင်လည်း ပျက်စီးမှာပဲ…ကျွန်တော်တို့ အမိုးက မလုံတော့ဘူး…. မေမေအပေါက်ကြီးကို မြင်နေရပေမယ့်… ဒီလောက်ဆိုးမယ်လို့ မထင်ခဲ့ဘူး… ကျွန်တော်က ယောက်ျားလေး… မိမိုးကမိန်းကလေးပါ… ဒီလိုပုံနဲ့… လူပြော…သူပြောခံရတဲ့ ဘ၀မှာ ခေါင်းမဖော်ဘဲ နေရတော့မှာလား… မေမေ… ကျွန်တော်တို့ကို အားကိုးလို့ရပါတယ်… ကျွန်တော်ကတော့ မေမေ့ကို ယုံကြည်ချင်တာ… မေမေ့ရဲ့ မူတွေကို ပြင်ပါတော့…ါခါတိုင်းဆို ကျွန်တော်တို့ ငရဲခံသလို ခံစားနေရပြီ… ကိုယ့်ရဲ့တစ်ကိုယ်အတွက်ပဲ မကြည့်ပါနဲ့… အခုဟာ မေမေ ကောင်းကောင်စား ကောင်းကောင်းဝတ်ရဖို့… အခြားလူတွေကိုတော့ မျက်ကွယ်ပြုထားတယ်….ကျွန်တော်တို့ကို ဘာဖြစ်နေတယ် ဘယ်လိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာကို… မသိဟန်များဆောင်နေတာလား… အခြားသူတွေ ပြောဆိုကဲ့ရဲ့နေတာကိုသိရက်နဲ့ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ပြီး ဆက်လုပ်နေတာ ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်… လိပ်ပြာလည်း မသန့်ဘူး… ကျွန်တော်တို့ ရှေ့လျှောက်ဆက်ကောင်းဖို့ ရည်ရွယ်သေးတယ်ဆိုရင်… မေမေရဲ့ ပေါက်နေတဲ့ ခေါင်ကိုပြင်ဖို့ကြိုးစားပါ… “ ကျွန်တော်ရဲ့ စကားအဆုံးမှာ မေမေ ဘာတစ်ခွန်းမှ ပြန်မပြောနိုင်တော့ဘဲ အရုပ်ကြိုးပြတ်ဖြစ်သလို ပုံကျသွားတယ်… ကျွန်တော်က အဲဒီနေ့ကစပြီး မေမေနဲ့ ဝေးသထက် ဝေးသွားတယ်… ကျွန်တော်… ပြင်ဦးလွင်… လားရှိုး… ကွတ်ခိုင်ဘက်အထိ ခရီးထွက်ပစ်လိုက်တယ်… သတင်းမှန်သမျှကို နားပိတ်ထားခဲ့တယ်…. ကျွန်တော်ခရီးထွက်ပြီး အားလုံးကိုမေ့ထားလိုက်တယ် စာကောင်းကောင်းရေးဖြစ်တယ်… ပြင်ဦးလွင်ကိုပြန် ရောက်လာတော့ ကျွန်တော့်လက်ထဲ လူကြုံနဲ့စာရောက်လာတယ်… မေမေနေမကောင်းဘူး… အမြန်ပြန်လာပါတဲ့…. ကျွန်တော်ခရီးထွက်တာ ငါးလလောက်ကြာသွားပြီ….မန္တလေးကိုပြန်ဆင်းလာတယ်…..မေမေ့ကို အပြင်အထူးကုဆေးခန်းမှာတင်ထားတယ်တဲ့………. ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ မယုံနိုင်အောင် ဆေးရုံကုတင်ပေါ်မှာ……မေမေကအရင်ပုံစံနဲ့ တခြားစီ အသားရေခြောက်ကပ်ကပ်……..ပိန်ပိန်လေး ဖြစ်နေတယ်…. ညီမကလဲ ဘာမှမေးလို့မရဘူး ငိုချည်းနေတယ်…ဆရာဝန်ကြီးတွေလာတာစောင့်ပြီးမေးတော့ မေမေ ရင်သားကင်ဆာတဲ့………လည်ချောင်းထိတောင် ပျံ့နှံ့နေပြီတဲ့ သိတာ တော်တော်နောက်ကျတယ်တဲ့…………….. ကျွန်တော့ခေါင်းတွေ ချက်ခြင်း မူးမိုက်သွားတယ်…သံသယပင်တစ်စက်မှ မရှိခဲ့ဘူးတဲ့ မေမေ ခံစားနေရတာ ကင်ဆာတဲ့……… ကင်ဆာရောဂါသည်တစ်ရောက်ရဲ့ သက်တမ်းဟာ….အိုး..ဘာမှမတွေးရဲတော့ဘူး …. ခွင့်လွတ်ပါ..မေမေ…….နောက်မှ ကျွန်တော်သိရတာ မေမေက ကင်ဆာမှန်းသိပေမယ့် မကုခဲ့ဘူး……သူ့ဘ၀ကို ပျော်သလိုနှစ်နေရင်းဦးနေကျော် ဆိုသူနဲ့တွေ့တယ် …….ဦးနေကျော်န့ လူရင်းလိုဖြစ်ရင်း တွဲခဲ့ရင်းက ဦးနေကျော်က မေမေ့ခံစားချက်ကိုသိပြီးဆေးကုခိုင်းခဲ့တယ်…..အားလုံး တာဝန်ယူပေးမှာကို ငြင်းခဲ့တယ်……ဦးနေကျော်က မေမေ့ဘ၀ကို သနားခဲ့တယ်…………ခုတော့ ရောဂါက ပြင်းထန်လာပြီး … နောက်ဆုံး အချိန်ရောက်မှ ဆေးရုံကို ခေါ်ခဲ့နိုင်တယ်တဲ့……. “ သားကို မင်းမေမေ သိပ်ချစ်ပါတယ်……သူဖွင့်နေတဲ့ ဆိုင်ခန်းဟာ ဦးပေးထားတယ်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် …..သူအလကားမယူပါဘူး………မင်းတို့အတွက် ဘဏ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံစုထားပေးတယ်…..” ကျွန်တော့မျက်စိတွေ မှိတ်လိုက်စဉ်မှာ မျက်ရည်ပူတွေ ကျဆင်းလာတယ်….မေမေ့ လက်ဖျားတွေကို ဆုပ်ကိုင်စဉ်မှာ…..နွေးထွေးတဲ့ဓါတ်လေးတစ်ခုတော……….စီးဆင်းနေတယ်……..ကျွန်တော့ကို ခွင့်လွတ်ပါမေမေ……….မေမေ့အပြုံးတွေကို ကျွန်တော် မြင်ချင်သေးတယ်…….. မေမေ့မျက်လုံးလေးတွေ ဖြည်းညင်းစွာ ဖွင့်လာချိန်မှာ …….. ပါးစပ်လှူပ်တယ်ဆိုရုံလေး “ သား “ လို့ခေါ်တယ်….မေမေ့မျက်ဝန်းက မျက်ရည်တွေ လိမ့်ဆင်းလာတယ်…….. မငိုပါနဲ့ မေမေ……. ကျွန်တော့ရင်တွေ ခါထွက်ကုန်ပြီ……. မေမေက ကျွန်တော့ကို အားယူပြီး စကားတစ်ခွန်းပြောတယ်………“ မေမေ့ရဲ့ ခေါင် ကိုပြင်ထားလိုက်ပါပြီ…တစ်ကယ်လို့ အပေါက်ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင်လည်း သားတို့ အဲဒီအောက်မှာ မနေစေရဘူး…အဲဒီအပေါက်အောက်မှာ မိုးရွာရွာ နေပူပူ မေမေပဲနေပါ့မယ်”………..တဲ့ကျွန်တော် မေမေ့စကားတွေအတွက် ဒီထက်ကြေကွဲဖို့ ဒီထက်ဆို့နစ်ဖို့ မရှိတော့ဘူး…ကြိုက်သလိုသာ အပြစ်ပေးပါတော………….မေမေနဲ ကျွန်တော်ထိတွေ့ခွင့်ရလိုက်တဲ့ ရက်တွေဟာ နည်းနည်းလေးရယ်….မေမေ ကျွန်တော်တို့ကို စိမ်းစိမ်းကားကား ဖြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီ……………ကျွန်တော် မေမေ့ကို အရင် အမြဲပြောခဲ့တယ်………..ကျွန်တော် အောင်မြင်ဖို့အတွက် မေမေ့ရဲ့ လှေကားတစ်တွေကို မလိုချင်ခဲ့ဘူး…….ကျွန်တော် ရှုံးနိမ့်ရင်တော့ မေမေ့လက်တစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားချင်တယ်လို့……..ကျွန်တော်ခု သေသေချာချာကြီး ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီ မေမေ……….မေမေ့လက်တစ်ဖက် ကျွန်တော့်ကို ပေးပါ။ဦးပိန်တံတါးရဲ့ မယ်ဇယ်ပင်တန်းအောက် ခုံတစ်ခုံပေါ်မှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း နေရာတစ်ခုတည်းမှာပဲ ပျော်ရွှင်စုရာတွေ တွေးဖြစ်သလို ၀မ်းနည်းကြေကွဲစရာတွေကိုလည်း တွေးခဲ့တယ်……စိတ်တို ဒေါသဖြစ်စရာတွေလဲ…ကြုံခဲ့တယ်..၀မ်းသာလွန်းလို့လဲ အော်ဟစ်ရယ်မောခဲ့ဘူးတယ်………..ခုတော့ ကျွန်တော် တစ်ခုခုကိုတော့ တွေးနေဆဲပဲ………..နော်ကလဲ ဆက်တွေးအုံးမှာပဲ……အချိန်ဆိုတာ အဆုံးမသတ်သရွေ့ပေါ့။ မိမိုးတို့လို ငယ်ရွယ်တဲ့ ကျောင်းသူ မိန်းကလေးတွေ မပျက်စီးဖို့ ကျွန်တော့မှာ တာဝန်ရှိသလို ခံစားရတယ်….အကျင့်စရိုက်ဆိုတာ သဘာဝက ပေးအပ်လာတဲ့ အမှန်တရားမဟုတ်လား…..ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနာဂတ်ကို စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်လာတယ်….တစ်ချို့ကလေးတွေကတော့ အသိစိတ်တွေ ကင်းမဲ့ပြီး အရိုးမှန်းသိရက်နဲ့ ဇွတ်မြိုချနေသူလေးတွေကို ယုံကြည်လွန်းသူတွေလို့ မှတ်ချက်ချချင်တယ် …….ဆေးလိပ်လေးတွေ လက်ကြားညှပ်ပြီး ဘီယာအရက်ပုလင်းတွေ ကို စားပွဲရှေ့ချ ကိုးယိုးကားယား နေထိုင်မှုတွေကို ……….စနစ်သစ်ထဲ ထိုးထဲ့ဖို့ ကျွန်တော်ကတော့ အတော်ဝန်လေးနေမိတယ်…….. ကျွန်တော် မေမေကတော့ ဘယ်လိုမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ တစ်နေရာကနေ လက်ပိုက်ကြည့်နေမလဲ မသိဘူး…အားမပြည့်သလို ချိနဲ့နေတယ်……ဖြစ်ချိန်တန်လို့ ဖြစ်သွားတာဘဲလေ……ကံစီမံရာပေါ့ဆိုတဲ့……..အဆုံးသတ် ဝေါဟာရနဲ့ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော် မဖြစ်ခဲ့တော့ ကျွန်တော်အသက်ရှင်သရွေ့ပဲ ဖြစ်မှာပါ………….ညနေ နေလည်း ၀င်နေပြီမို့ ကျွန်တော် အတွေးတွေ ပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်……..နောက်နေ့တွေမှာ ဒီမယ်ဇယ်ပင်တန်းအောက် ကဗျာတစ်ပုဒ် ဒါမှမဟုတ်ရင် ၀တ္တုတစ်ပုဒ် ရေးဖြစ်ချင်ရေးဖြစ်မယ်……… မရေးဖြစ်လဲ…ခုလိုပဲထိုင်ပြီး တစ်ခုခု တွေးဖြစ်ချင် တွေးဖြစ်မယ်…….ဘာမှ မသေချာသေးဘူး….သေချာတာကတော့ ကျွန်တော်ပြန်သွားလို့ ခဏနေကြာရင် ဆိုင်က ကောင်လေးတွေ ထိုင်ခုံသိမ်းပြီး ဆိုင်ပိတ်ကြတော့မယ်…….ဒါကြောင့် ကျွန်တော် မယ်ဇယ်ပင်တန်းအောက်က အတွေးတွေကို လက်စသတ်ခဲ့တယ်။
ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်း ချောအိမာန်(မန္တလေး) Posted by
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြန်လို့ ဘူတာလိုက်ပို့ဖြစ်တယ်… ပြောထား၊ ရေးထားတဲ့ အချိန်ကိုတော့ လေးစားစွာနဲ့ ကိုယ့်ဘက်က နောက်မကျအောင်လာခဲ့တာ ဆယ်မိနစ်လောက်တောင် စောနေသေးတယ်…ဘူတာမှာလဲ…ခရီးသွားမဲ့ သူတွေက ရပ်စောင့်၊ အိပ်စောင့် ထိုင်စောင့်နဲ့ အပြည့်ပါ… ထိုင်စရာနေရာကတော့ ခုံလေးတွေလုပ်ထားပေမဲ့ရှာမတွေ့ဘူး.. မနီးမဝေးက ခုံတစ်ခုံမှာတော့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးသင်္ကန်းခြုံပြီး လဲလျောင်းစွာနဲ့ ခုံသုံးခုံအပြည့်အိပ်လို့… တစ်ချို့ကတော့ ဘူတာစင်္ကြလမ်းကို ကိုယ့်အိမ်က အိပ်ရာအလား အခင်းမပါနဲ့ ခြင်းတောင်း ခေါင်းခုအိပ်နေကြတာ စွင့်လို့… ကလေးတွေ ကတော့… သူတို့ပါလာတဲ့ သံသေတ္တာပေါ် ဘောင်းဘီတစ်ဝက်ကျွတ်နဲ့ အိပ်မက်ပင်မက်နေမလား မသိ ဘယ်တော့ထွက်မဲ့ ရထားကို အိပ်မောကျစွာစောင့်နေလဲမသိ.. မိသားစုတွေအပုံအပင်… ကျွန်မတို့ကတော့ပါတဲ့အထုပ်တွေကိုချရင်း ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ပေါ့… ခဏနေတော့ ရန်ကုန်ကထွက်လာမဲ့ ရထားဆိုက်ရောက်တော့မှာဖြစ်ကြောင်း… အသံကို မပီတပီေ၀၀ါးစွာကြားရတယ်… နားကကျင့်သားရနေပြီမို့… ဒါကြော်ငြာပေးတာဆိုတာ သူ့အလိုလိုသိနေပြီ… ရန်ကုန် ရထားဆိုက်ပြီးတော့… ကျွန်မသူငယ်ချင်းစီးမယ့်… ပုဂံညောင်ဦးရထားက တော်တော်နဲ့ဆိုက်မလာသေးဘူး… ခြင်တွေကလဲကိုက်လှပြီ… သိပ်မဟုတ်လှဘူးထင်တာနဲ့… မေးကြည့်လိုက်တော့… တွဲချော်လို့ နံနက်ငါးနာရီလောက်မှ ရောက်မှာတဲ့၊ မြတ်စွာဘုရား… ကျွန်မသူငယ်ချင်း စိတ်အတော်ညစ်သွားတယ်… ဒါဆိုရင်တစ်ရက်ပုတ်ပြီ… အိမ်က တစ်ခေါက်ပြန်ရအုံးမယ် အဝေးကြီး… ကျွန်မတို့ စိတ်ဓါတ်ကျပြီး၊ အိမ်ကနေပဲ မသေချာသေးတဲ့ ငါးနာရီးကို ဖုန်းပြန်ဆက်ရတော့မယ်… အိပ်လို့ကောင်းကောင်းမပျော်ဘဲ စိတ်စောပြီး ဖုန်းဆက်ဖြစ်နေတယ်… နောက်ဆုံးကျ ဘယ်လိုမှ ဆက်မရတာမို့ မနက်လေးနာရီကို နံနက်စာ စားပြီး၊ ဘူတာကို လစ်ခဲ့ရတယ်… ရထားဆိုက်မလာသေးဘူး… မျက်လုံးကလဲ အိပ်ရေးမ၀တော့ ကျိန်းစပ်စပ်တွေဖြစ်လို့… ငါးနာရီ ဆယ်မိနစ်လောက်မှာရောက်လာတဲ့ ပုဂံရထားကိုလဲတွေ့ရော ထီပေါက်သလို ၀မ်းသာသွားတယ်… သူငယ်ချင်းကလဲ ကျွန်မကိုအားနာပြီး၊ ပြန်တာ့လို့ဘဲဇွတ်ပြောနေတယ်… သူ့ကိုတွဲပေါ်မှာမီးမရှိလို့ ဂရုစိုက်ဖို့… ပစ္စည်းတွေသေချာစစ်ဖို့ မှာရသေးတယ်… လက်ထဲပါလာတဲ့ ဓါတ်မီးကို သူပဲတွဲပေါ်မှာ သုံးဖို့ ပေးလိုက်ရတယ်… သူ့ကိုပို့ပြီးမှ စိတ်ချလက်ချနဲ့ အိမ်ပြန်လာရတယ်… အိမ်ရောက်တော့ မျက်လုံးက ပြန်မအိပ်ချင်တော့ဘူး… သားနဲ့သမီးကတော့ ခြင်ထောင်ထဲမှာ အိပ်ကောင်းတုန်း အမျိုးသားက ခရီးသွားနေလေရဲ့ စိတ်မချပေမဲ့လဲ ဒီလိုထားခဲ့ရတာပါဘဲ… အိမ်မှာကူဖော် တစ်ယောက်လိုချင်တာကို… စိတ်တိုင်းမကျတာနဲ့ အဆင်မပြေလှဘူး… အဓိကတော့ သားနဲ့သမီးအတွက်ပဲ ခေါင်းထဲထည့်ထားနိုင်တယ်… သူတို့တွေကို ပညာတတ်လေးတွေဖြစ်စေချင်တယ်… ဘ၀ကြီးက ကျွန်မတို့ကို ဖြစ်သလိုပေးပေမဲ့ ကျွန်မတို့က ဖြစ်သလိုနေလို့မဖြစ်ဘူး… သူတို့လေးတွေမြန်မြန်ကြီးမှပါပဲ။ တွေးမိရင်းပဲ ဘေးအိမ်က ဆူညံဆူညံကြားရပြီး၊ စောစောစီးစီး အိပ်ချင်မူးတူးရုပ်လေးတွေနဲ့ ကလေးသုံးယောက် တရုတ်ကျူရှင်သွားကြတော့မယ်… ပြီးရင် ဗမာကျောင်း ပြီးရင် အင်္ဂလိပ်လိုသင်တဲ့ကျောင်း… စုံနေတာပဲ… ဒီကြားထဲ အိမ်ခေါ်သင်တဲ့စပီကင်၊ အိမ်မှာအားရင် စိတ်တိုင်းကျနှိပ်လို့ရနေတဲ့ ကွန်ပျူတာဂိမ်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်ရအောင် စက်ကရိယာပစ္စည်းတွေ… ဒါတွေကို တွေးမိရင်း၊ ကျွန်မသားနဲ့သမီးအတွက် မျက်နှာငယ်စရာပါ… ကလေးချင်းက မတိမ်းမယိမ်းတွေ… ဦးနှောက်က ကျွန်မကလေးတွေကပိုသာပေမဲ့… အတွေ့အကြုံနဲ့ အခွင့်လမ်းတွေက ပိုက်ဆံရှိသားသမီးမှာ ပိုများနေတယ်… ကျွန်မသားလေး ဂိမ်းမဆော့တတ်သလို… သမီးလေးက ကွန်ပျူတာဆို ကိုင်ပင်ကြည့်ဖူးတာမဟုတ်… သူတို့သားသမီးတွေငယ်ငယ်လေးနဲ့ ဘိုလိုကျင်လည်အောင်ပြောတတ်နေချိန်မှာ… သားနဲ့သမီးက… အခြေခံကိုလေ့လာသင်ယူတုန်း… ဒါကလဲ ကျောင်းက သင်တဲ့သင်ခန်းစာထဲက ရယူရတာပါပဲ… သူတို့ကလေးတွေက ကာတွန်းဆိုရင်တောင် အင်္ဂလိပ်စာပါတဲ့ကာတွန်းမှ ဖတ်တတ်တာ… ဗမာကာတွန်းဆိုရင် ဖတ်ရတာ ခက်လွန်းလို့ဆိုတဲ့ သူတို့မေမေပြောသံကို မကြာခဏကြားရတယ်… သူတို့လေးတွေရဲ့ အဖေနဲ့အမေက ပညာမတတ်ပေမဲ့ သူတို့သားသမီးတွေကို လူတန်းစိမက ထားနိုင်တယ်… ကျွန်မနဲ့ အမျိုးသားက ဘွဲ့ရပညာတတ်တွေဖြစ်ပေမဲ့… ကျွန်မတို့ကလေးတွေကို လူတန်းစိရုံလေးသာထားနိုင်တယ်… သူတို့ကလေးတွေကြီးလာရင် အားလုံး နိုင်ငံခြားပို့ပြီး… ဟိုမှာ အလုပ်လုပ်ကြမယ်… ကျွန်မကလေးတွေရော ကြီးလာရင် ဒီမှာ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ… ကျွန်မတို့ကို သဘာဝတရားကြီးက ဖဲချပ်တွေကို အတူတူဝေပေးလိုက်တာဘဲ… ကံတရားအရ ကံကောင်းသူတွေမှာ… အခွင့်အရေးနဲ့အခွင့်အလမ်းဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေရှိတဲ့… ဖဲချပ်လေးတွေပါသွားကြတယ်… ကျွန်မတို့မှာ အဲဒီဖဲချပ်တွေမပါတော့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး… ဥာဏ်ကူရတယ်… ဒီကစားနည်းလိုဘဲ… ဥာဏ်မကူဘဲ၊ ကံတရားအရ ကိုယ့်ဆီကို ရောက်လာမဲ့ ဖဲချပ်ကိုစောင့်နေရင်… မိုးချုပ်သွားမယ်… အဲဒီတော့ဖြတ်ထိုးဥာဏ်သုံး… ကစားနည်းကို ပုံမှန်ကြီးကိုင်မထားပဲ တမျိုးပြောင်းချင်ပြောင်းရမှာပေါ့ ကျွန်မရဲ့ သားသမီးတွေမှာ သူတို့ကို အခွင့်အလမ်းတွေမပါတော့… ကျွန်မတို့ မိဘတွေတတ်စွမ်းသမျှပေါ့… သေချာတာတစ်ခုက ကျွန်မသားသမီးတွေကို လူညံ့တော့မဖြစ်စေရဘူး… တစ်ဆယ်ကနေ ကိုးဖြစ်သွားတာနဲ့… ရှစ်ကနေကိုးဖြစ်သွားတာ… ကိုးချင်းအတူတူပေမဲ့ ကျွန်မက ရှစ်ကနေ ကိုးဖြစ်မှုကိုပဲ လိုလားတယ်… တခါတလေ ကျွန်မကလေးတွေ မျက်နှာငယ်သလိုခံစားရတယ်… ဒါကြောင့် သူတို့အတွက် ကျွန်မ မရောင့်ရဲနိုင်သေးဘူး… ကျွန်မက လူကြီးတွေအတွက်ရော ကလေးတွေအတွက်ပါ စာကြည့်ခုံရှေ့မှာ စာတန်းတစ်ခုကပ်ပေးထားတယ်… Life isachallenge --------- meet it ဘ၀ဆိုတာ စိန်ခေါ်ခြင်းဆိုရင်လဲ… ရင်ဆိုင်လိုက်ပါ… တဲ့အမျိုးသားက ကျွန်မနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်လို့ အိမ်ပေါ်က ဆင်းလာခဲ့ရတယ်…. ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် အတူလက်တွဲပြီး ဘ၀ရဲ့စိန်ခေါ်ခြင်းတွေကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကျော်လွှားဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်…. လူအမျိုးမျိုး၊ စရိုက်မျိုးစုံရဲ့ ကဲ့ရဲ့မှုကိုလဲ ခံခဲ့ရတယ်… အဲဒီစာတန်းလေးက ကျွန်မတို့ကို အားဖြစ်စေခဲ့တယ်… အမျိုးသားဘက်က ခုချိန်ထိ လှည့်မကြည့်ခဲ့ပါဘူး… သားကို အချစ်ဆုံးလို့သာ ပြောတာ မျက်ကွယ်ပြုနိုင်သားပဲ ကျွန်မကတော့ ကိုယ့်မိဘလို သဘောထားပေမဲ့… စရိုက်မတူတာကြောင့် အမြင်စောင်းမှုတွေက အမျိုးမျိုးပါပဲ…သူတို့သား ကျွန်မနဲ့လက်ထပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရဲတာကို ဇွတ်တရွတ်ဆန်တယ်တဲ့… တခါတလေ… ချင့်ချိန်စဉ်းစားတာကို…. သရဲဘော… ကြောင်တယ်တဲ့… ကျွန်မကဆင်းရဲသူတွေ မရှိသူတွေကိုပေးကမ်းတာကို… လက်ဖွာတယ်တဲ့… စည်းကမ်းနဲ့ပေးတော့လဲ ကပ်စေးနဲတယ်ဖြစ်ပြန်ရော…အမျိုးသား ညီမ တွေထက်စာရင် ကျွန်မက အရာရာ ဦးဆောင်နိုင်တာကို… နေရာယူတယ်တဲ့… ကျွန်မရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကိုကျ… လည်လွန်းတယ်လို့ခေါင်းစဉ်တပ်ကြပြန်ရော…အဲဒီတော့ ဘယ်မှာလဲနေစရာ… အိမ်သပ်သပ်ဆီမို့လို့ပဲတော်သေး… ကျွန်မကတော့ လာမပါတ်သက်လေ ကြိုက်လေဘဲ… သားနဲ့သမီးကိုတော့ တတ်သိနားလည်အောင်သင်ပေးထားတယ်… ကျွန်မနိုင်သလောက်… ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သလောက် ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်…ဘေးအိမ်က ကလေးတွေရဲ့ အနာဂါတ်ကကောင်းပါရဲ့… ဒါပေမဲ့ ဆုံးမပဲ့ပြင်မှုမရှိ၊ အလိုလိုက်ထားတော့ ပုံစံလေးတွေက… လူကြီးကို လူကြီးမှန်း မသိတဲ့ပုံလေးတွေဖြစ်နေပြီး ငယ်တုန်းကတော့ ထမင်းကို ၀ါးပြီး ခွံ့ခဲ့တာ ကောင်းတယ်ထင်ပေမဲ့… ကြီးလာတော့ အံဖတ်တွေလို့ ထင်နေတတ်ပြီ…ခက်တာက သူတို့လုပ်တာတွေပဲ အကောင်းထင်နေတတ်တယ်… အမှန်တော့ ကိုယ်က ကြိုက်လို့ကောင်း၊… ကောင်းတာမို့လို့ ကြိုက်တာဆိုရင် အကောင်းဆုံးကိုပိုရနိုင်တာပေါ့ သူတို့သားသမီးတွေက… မိဘတွေပြည့်စုံလွန်းတော့ ယုံကြည်မှုနဲ့ မျက်စိမှိတ်ပြီး… အားကိုးချင်ကြတယ်…ကျွန်မကလေးတွေကိုတော့ ယုံကြည်မှု… စိတ်ဓါတ်တွေသေချာခိုင်မာအောင်… တတ်စွမ်းသမျှပြုစုပျိုးထောင်ရတယ်…ကော်ပါတ်ရုပ်ကို လူအစစ်ထင်ပြီး ပျော်တတ်တဲ့ကလေးမျိုး ဖြစ်သွားမှာကို ကျွန်မကြောက်တယ်… သူတို့စိတ်ထဲမှာ အမှားအမှန် အတုအစစ်ခွဲခြား ဆန်းစစ်နိုင်ဖို့စွမ်းရည်တွေရှိလိမ့်မယ်လို့… ယုံကြည်တယ်…သူတို့ကလေးတွေ စူပါမားကတ်တွေသွား Ready made တစ်ထည် သုံးလေးသောင်း ၀ယ်ပေးနိုင်ချိန်မှာ… ကျွန်မကိုယ်တိုင်ချုပ်ထားတဲ့ တရုတ်ချည်သား အကျီင်္လေးက သားကိုယ်ပေါ်မှာ အရောင်တောက်ပနေပါတယ်… သူတို့တွေ ကောင်းလှတဲ့ ကျူရှင်တွေ၊ သင်တန်းတွေထားပေးနိုင်ချိန်မှာ… ကျွန်မသားသမီးအတွက်… အဲဒီပညာထက်မလျော့တဲ့… လောကရဲ့အသိအမြင် ဗဟုသုတတွေ… လူမှုဆက်ဆံရေးတွေ… ကျွန်မသင်ပေးနေနိုင်ပါတယ်… သူတို့သားသမီးတွေ ဘွဲ့ယူနေတဲ့အချိန်မှာ… ကျွန်မသားနဲ့သမီးလဲဘွဲ့ရနေနိုင်ပါပြီ… ကံကောင်းရင် ဘွဲ့နှစ်ခုတောင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်အုံးမှာ…သားသမီးနဲ့ပါတ်သက်ရင် လူတိုင်းမှာတော့ အတ္တရှိကြတာပဲ… ကျွန်မ သားနဲ့သမီး အတွက် ဘယ်လိုရှေ့ဆက်လျှောက်မလဲ… ပိုက်ဆံရှိသူနဲ့ မရှိသူကြားမှာ အရမ်းကွာခြားသွားမဲ့ လူနေမှုစနစ်ရဲ့ဒါဏ်ကို… ကျွန်မကလေးတွေမခံစားစေချင်ဘူး…သူတို့တွေကြီးကျယ်ခန်းနားထဲ့ စူပါမားကတ်တွေသွားတတ်ရင်… ကျွန်မကလေးတွေလဲ သွားရဲရမယ်… သွားတတ်ရမယ်… ပြိုင်ဆိုင်လိုတဲ့စိတ်မရှိပေမဲ့ နည်းနည်းလေးကနေ အရာရာနှောင့်နှေးပြီး ကျန်ခဲ့မဲ့အဖြစ်ကို ကျွန်မ မလိုလားဘူး… သူတို့တစ်ခုသိရင်၊ ကိုယ့်ကလေးလည်းသိနေနိုင်ရမယ်… ဖြစ်ချင်တာတွေများပြီးကလေးတွေကို မနိုင်ဝန်ထမ်းခိုင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး… ဒီတော့ ကလေးတွေ ဘယ်လိုဆက်လျှောက်မလဲဆိုတာ ကျွန်မစိတ်ဝင်စားတယ်… ရှေ့က လူက နည်းမှန်၊ လမ်းမှန်ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ကိုယ့်မှာ နဂိုမူလကတဲက လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ဖဲချပ်လေးတွေိကို တတ်လာမဲ့အခွင့်အလမ်း ဖဲချပ်လေးတွေနဲ့တွဲပြီး၊ အကျိုးရှိစေဖို့ ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရမှာဘဲ… ကိုယ့်ဆီမှာရှိတဲ့ မူရင်းတွေကိုအသုံးမချ… ပါတ်ဝန်းကျင်ကို မလေ့လာဘဲနဲ့လဲ ကံတရားဖဲချပ်ကို အသေစောင့်ပြီး၊ မျှော်ကိုးနေလို့လဲမရဘူး… တိုးတတ်ခြင်းရဲ့လမ်းစကိုရဖို့အတွက်… လူငယ်တွေ ခုချိန်ကတဲက ဘယ်လိုလျှော်ကြမလဲ….သားနဲ့ သမီးအတွက် အမြဲတွေးပူနေတဲ့ ကျွန်မကို အမျိုးသားက ပြောတယ်… နောက်ကျရင်ဖြစ်သွားမှာပါကွာ…တဲ့… အဲဒီနောက်ကျရင် ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ကျွန်မက မကြိုက်ဘူး… နောက်ကျရင် နောက်ကျသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ…ပိုက်ဆံရှိချမ်းသာကြတဲ့… အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုထဲကွက်ပြီး… တိုးတတ်နေတာကို တကယ်တိုးတတ်တယ်လို့ မခေါ်နိုင်ပါဘူး… ဒါပေမဲ့… သူတို့သားသမီးတွေကတော့ လှေကားအဆင်သင့်ပေါ့လေ… လှေကားဆိုရင်တောင်တတ်ရတာ မောပန်းနေအုံးမယ်... ဓါတ်လှေကား ဓါတ်လှေကားပေါ့……ကျွန်မသားသမီးတွေအတွက်ကတော့… တတ်ရမဲ့လမ်းတွေက မချောမွေ့ဘူး… ကျောက်သား၊ ကျောက်ဆိုင်တွေပေါမယ်… စူးခလုပ်တွေရှိမယ်… ပင်ပန်းမယ်… အဲဒီအတွက် စိတ်ဓါတ်ကျဖို့မလိုပါဘူး… ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဘယ်လိုလျှောက်မလဲပဲသိဖို့လိုအပ်တယ်… အမြင့်ကိုအတူတူရောက်ခဲ့ရင်တောင် မင်းတို့မှာ အတွေ့အကြုံ တွေရဲ့အင်အား… ပင်ပန်းခဲ့ရတဲ့ ခံနိုင်ရည်သတ္တိ… ဆိုတဲ့စွမ်းရည်တွေပိုသာနေပါလိမ့်မယ်… ကျွန်မအာမခံနိုင်ပါတယ်…ကော်ဖီဖျော်ရင်းတန်းလန်း သားနဲ့သမီး နိုးလာပြီမို့ ကျွန်မအတွေးတွေ အဝေးကို ရောက်သွားသည်… နံနက်စာစားပြီး… ထမင်းချိုင့်ကိုယ်စိယူပြီးချိန်မှာ… အမေလုပ်သူကို နမ်းသွားရင်း ကျောင်းကို ခြေလျင်ချီတတ်သွားကြပြီ…သူတို့လေးတွေရဲ့ခြေလှမ်းတွေဟာ… နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အချိန်မှာ… ဘယ်လိုခြေလှမ်းတွေနဲ့ လျှောက်လှမ်းနေပြီလဲ…. ကျွန်မ သိချင်လိုက်တာ……………..။
ရုပ်ရှင်အမြုတေမဂ္ဂဇင်း (၂၀၀၆)ချောအိမာန် (မန္တလေး)
( ၁ ) ကလေးလေး မွေးပြီ… ကလေးလေးမွေးသွားပြီတဲ့… ပြီးတော့ မိန်းကလေးတဲ့ ကလေးလေးက ဘယ်သူနဲ့များတူသလဲ… သူ့အဖေက မိန်းကလေး ဆိုတာသာသိရင် ဘယ်လောက်ဝမ်းသာ လိုက်မလဲ။ သူမ ကြားကြားချင်တောင် ရင်ထဲမှာ ဘာမှန်းမသိ ဘယ်လိုခံစားချက်မှန်းမသိတဲ့ လှိုင်းတစ်ခုဖြတ်သွားသလိုဘဲ… သူမ… ကလေးလေးကို ကြည့်ချင်ပါတယ်… ဖုန်းထဲက အသံရှင်သူမကို ချက်ချင်းလှမ်း အကြောင်းကြားတဲ့ ကလေးလေးရဲ့အဖေ့အသံဟာတုန်လှုပ်မှုတွေနဲ့ အကြောင်းကြားခဲ့တာ… သူမ နံရံမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေဆီ အကြည့်ရောက်တော့ သွားလေးတွေ အစွမ်းကုန်ပေါ်အောင်ရယ်မော နေကြတဲ့ သားနှစ်ယောက်။ သားနှစ်ယောက်ရဲ့တဖက်စီမှာ တော့ သူမနဲ့ခင်ပွန်း… ကလေးတွေအဖေပေါ့ သူမ ကိုယ်ဝန်ကို အင်မတန် ဂရုစိုက်ပြီး သားကြီး ကိုမွေးပြီဆိုတာ သိလိုက်တော့။ သူ လက်သီး လက်မောင်းတန်းပြီး မွေးခန်းအပြင် ဘက်မှာ အော်မိတာ အကြိမ်ကြိမ်တဲ့… “ ဒါမှ ငါ့သားကွ “ ဆိုတဲ့ မာန်အပြည့်နဲ့သူ့အဖေကို ဆေးရုံက ဆရာမတွေက သဘောကျလွန်းလို့ တခစ်ခစ်ရယ် ကြတယ်… သူကတော့ မရှက်ဘူး… သားကို လက်ပေါ်ကမချ။ နှာတံ၊ မျက်ခုံးတွေက သူနဲ့တူပြီး နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ မျက်နှာကျက သူမနဲ့တူတယ်တဲ့…. အသားအရည်ကတော့ ဖြူနုနေတာဘဲ… အံမယ် ရယ်လိုက်တော့မှဘဲ ညာဘက် ပါးမှာ ပါးချိုင့်ကြီးက ထင်လို့… သားမျက်နှာကို မွှေးကြူမဆုံး၊ နမ်းလို့လဲ အားမရ၊ အနှီးတွေကို ကိုယ်တိုင်လျှော်၊ ဖြစ်နိုင်ရင် သူက နို့တောင်သူတိုက်ချင်တာ။ အဲဒီလောက် သဲခဲ့တဲ့ သားတို့ရဲ့အဖေနော်။ ပြည်ပန်းညိုဟင်းရည် သောက်ရတယ်။ ကလေးအတွက် နို့ထွက်ကောင်းတယ်… မိန်းမ ဘာမှမလုပ်နဲ့ သား ကိစ္စကိုယ်ပဲလုပ်မယ်။ ဟောသားငိုနေပြီ ရှူးရွှဲနေတာ… နေ နေ အိပ် မိန်းမ ကိုယ်လုပ်ပေးလိုက်မယ်… သားက ဗိုက်နာလို့လား မသိဘူး၊ အီနေတယ်။ ကိုယ်ချော့လိုက်မယ်။ အိပ် မိန်းမ အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်။ ခုတလော မိန်းမကြည့်ရတာ နည်းနည်းပိန်နေသလိုပဲ။ အားရှိတာစားချင်တာစား၊ ဘာမှ လုပ်မနေနဲ့။ သားကို မြန်မြန်ကြီးစေချင်လှပြီကွာ၊ ဆရာဝန်ဖြစ်မလား၊ အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်မလား၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီး ဖြစ်မလား။ သား အဖေ အသံတွေ… နောက်မှာ အတိတ်မှာ ကျန်ခဲ့ပြီ။ ခုရော… သူမအပေါ်မှာ ဂရုစိုက်ခဲ့သလို ဂရုစိုက်နေမှာဘဲလား… ဒီလိုဆိုလဲ ကောင်းတာပေါ့၊ မိန်းမသား တွေဆိုတာ ဒီအချိန်မှာ လင်သားရဲ့ မျက်နှာဟာ အားဆေးလိုပဲ… သူမ တကယ့်ကို ပကတိအတိုင်း စိတ်ထဲမှာ ဘာရှိသလဲဆိုတာ ပြန်ကြည့်တော့ သူမအမှန်တကယ် ၀မ်းသာ တာဖြစ်သလို၊ ရင်ထဲမှာ အမျိုးအမည်ဖော်မရတဲ့ ခံစားချက်ပါ ဒွန်တွဲပါလာခဲ့တယ်။ အဲဒါကို ဘယ်လို ထုတ်ဖော်ပြောရမလဲ ဆိုတာ သူမကိုယ်တိုင်လဲ အတိအကျမသိပါ။ မျက်ရည်ဝေ့တတ်လာသည်အထိ သူ့အသံကို ဖုန်းလိုင်းထဲကနေ ကြားရစဉ် ပြန်မပြောနိုင်အောင်ခေတ္တဆွံ့အသွားခဲ့တယ်… အရင်တုန်းကတော့ ဝေဒနာ အထုပ်အပိုးကြီးကို ထမ်းထားရတာ ခါးသီးစရာကောင်းသလို မလွတ်လပ်လိုက်တာ။ ပေါက်ကွဲမှုတွေ အကြိမ်ကြိမ် ပိုးကိုက်ရာဗလပွနဲ့အနားသတ်တွေက စုတ်ပြတ်နေခဲ့တယ်။ ကိုယ်ချင်းစာတရားဆိုတာ သူမရင်ထဲ တကယ်ပင်ကိန်းဝပ်နိုင်ပြီးလားလို့ စဉ်းစားမိတဲ့ တခဏ ခြောက်ခြားသွေးပျက်ခဲ့တယ်။ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတဲ့ အခန်းကို တစ်ခန်းချင်း စဉ်းစားတိုင်း သူမက စိတ်ရိုင်းတွေဝင်နေတဲ့ လူရိုင်းမကြီး ဖြစ်လို့နေတယ်။ ရယ်စရာကောင်းသလို၊ ငိုချင်စရာတွေနဲ့ပြည့်နှက် နေတယ်၊ သား နှစ်ယောက်များ သိခဲ့ရင် ဘယ်လောက်တောင် သူ့အဖေအတွက် နောက်ပြီးသူမအတွက် ၀မ်းနည်းဒေါသဖြစ်လိုက်မလဲလို့ တွေးမိတယ်။ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး အားအင်တွေ ယုတ်လျော့သလို ခံစားရပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်ပစ်လဲကျသွားဖူးတယ်၊ ငိုထားတဲ့ အရှိန်နဲ့ မျက်လုံးတွေ ဖူးရောင်မှုက ဖွင့်လို့မရအောင်ကို ပိတ်နေခဲ့တယ်။ သူမရဲ့ လက်သီးဆုပ်တွေဟာ သူ့ရဲ့ရင်ဝနဲ့ ပခုံးထက်ဆီကို ဦးတည်ခဲ့တာ အချက်ငါးဆယ်မက … သူကတော့ သူမကို ဆွဲပွေ့ဖက်ပြီး နီရဲတဲ့ မျက်ဝန်းတွေကြားက တောင်ပန်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ဟင့်အင်း မတောင်းပန်ပါနဲ့ အဲဒီစကားသံကြားရင် ဒီထက်ဆိုးတဲ့ အပြုအမှုကို သူမလုပ်မိလိမ့်မယ်။ သူနှစ်သက် လှပါတယ်ဆိုတဲ့ စာအုပ်တွေကို စင်ကနေယူပြီး အကုန်လွင့်ပစ်လိုက်တယ်။ ရင်နာပေမယ့် သူလဲ ဒီအတိုင်းကြည့်နေတယ် သူမြတ်နိုးတဲ့ ပစ္စည်းတွေဟာ တဒင်္ဂအတွက်လား၊ သူမကရော တဒင်္ဂ ဖန်တီးရှင်တော့ မဖြစ်ထိုက်တာ သေချာပါတယ်။ သူမ ဟားတိုက်ရယ်မောလိုက်တယ်။ ကြောင်စီစီ မျက်လုံးတွေကို သူကြောက်ပုံရတယ်။ သူမ ပုခုံးကို ကိုင်ပြီး ခေါ်တယ်။ အသိနဲ့ သတိ ပြန်ဝင်လာအောင် ပုတ်နိုးလိုက်သလိုဘဲ။ နောက်သူမရင်ထဲ ၀မ်းနည်းမှုနဲ့ အတူ ငိုမိတယ်။ သူက သူ့ရင်ခွင်ထဲကို သူမအား ဆွဲသွင်းပွေ့ဖက်ပြီး သူမရဲ့ မျက်ရည်တွေသုတ်ပေးရင်း တရှိုက်မက်မက် နမ်းတယ်။ သူမ မရုန်းကန် မိတော့သည်တိုင် အရုပ်ကျိုးပြတ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ ရှင်ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်မကို နမ်းနေသေးလဲ… သူမ မမေးဖြစ်တော့ပါဘူး။ မောပန်းနွမ်းလျတဲ့ စီးဆင်းမှုနဲ့အတူ သူမတို့နှစ်ယောက် တကုတင်ထဲမှာ အတူအိပ်စက်ခဲ့ကြသေးတယ်။ သူမ ဘာက်ို လိုချင်တာလဲ သူဘာတွေဖြစ်ချင်တာလဲ… ဆိုတာတွေမသိနိုင်… အိပ်မက်တွေပျက်စီးပြီလားမသိနိုင် ဘာမှမသိနိုင်တဲ့ နေ့တွေကို အဓိပ္ပာယ်မဲ့ ကျော်ဖြတ်ရဦးမှာပါလားလို့ မှန်းဆရင်း… သူမဟာ နေ့သစ်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ပြင်ခဲ့တယ်…( ၂ ) စားပွဲပေါ်ကို ပက်ကနဲ ကျသွားတဲ့ အဖြူရောင် စာရွတ်ကို ကြည့်ရင်း သူ့မျက်ဝန်းတွေ အရောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဒါကြိုတင် သိသင့်တဲ့ကိစ္စဘဲ သူမက ဘက်မှတ် ထိုးပြီးပြီ။ သူက စာရွတ်ကိုကိုင်ရင်း ဒါမလိုအပ်ဘူးတဲ့။ သူမအတွက် လိုအပ်တယ်လေ… သူ ရှင်းပြတာကို နားထောင်ပါတဲ့… ဒါကမှ တကယ်မလိုအပ်တဲ့ ကိစ္စဘဲ… အချစ်နဲ့ နှလုံးသားရေးရာကိစ္စမှာ ပေတံမရှိပါဘူး။ လမ်းဟောင်းကြီးအတိုင်း ပြီးဆုံးလို့… ဘာကိုမှ စွဲမက်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ သူမ အဖြေကိုမရှာချင်ဘူး။ သေဆုံးသွားပါစေ။ နေပါစေတော့။ ဘာမှ မသိတဲ့ အဝေးက သားနှစ်ယောက် မျက်နှာ မြင်မိတော့ သူတို့ကို ခံစားမှုတွေ မပေးချင်ဘူး။ ပိုစိတ်ထိခိုက်မှုက ကြီးစိုးလာတယ်။ သူလဲ တဒင်္ဂစိတ်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို တွေးနေပုံရတယ်။ သူ့အကြောင်းကို သူမသိတာပေါ့။ ဘာကြောင့်များဆိုတဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အဖြစ်အပျက်တွေက ပြီးခဲ့ပြီ။ ရှိနေတဲ့ အဖြစ်ကတော့ ပြန်ပြင်လို့ရမှာ မဟုတ်။ သားတွေရဲ့ အဖေ အဖြစ်သူ့ကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ လေးစားနေစေချင်သေးတယ်။ အဖေကို အထင်သေးတဲ့၊ မလေးစားတဲ့၊ အပြုအမူမျိုးကို သားတွေမှာမရှိစေချင် ငရဲမရစေချင်။ ဒီလိုနဲ့ သူမ ဒေါသတွေ မီးတွေကို ချိုးနှိမ်ပစ်ခဲ့တာ ဘယ်လောက်အံသြစရာ ကောင်းသလဲ။ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ စိတ်ချမ်းမြေ့မှုလေးကို ကိုယ်မှ ရအောင် မဖန်တီးနိုင်ရင် သူမဟာ ခံနိုင်ရည်ဆိုတာရှိပါဦးမလား။တကယ်တော့ ခံနိုင်ရည်ဆိုတာ မျိုးရိုးဗီဇအရ ပါလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကြိုတင် ပြီးတော့ လေ့ကျင့်တည်ဆောက်ထားခဲ့တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်မိန်းမကမှ ဒီလို အဖြစ်မျိုးကို လက်ပိုက်ပြီး ခံနိုင်ရည် ရှိနိုင်မှာတဲ့လဲ။ သူမလည်း ပုထုဇဉ်လူသားတစ်ယောက်ပဲလေ။ သေချာတာတစ်ခုကက သူများနဲ့မတူတဲ့ ခံယူချက် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုက သူမမှာ ရှိနေပြန်တယ်။ ဒါဟာ ဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ မေတ္တာတရားပဲ။ အခြားအရာတွေကို ဥပေက္ခာမပြုနိုင်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီမပြုနိုင်ခြင်းကပဲ သူ့အပေါ်မှာတင်ကျန်နေတဲ့ သူမရဲ့အကြွေးပဲဆိုပါတော့။ ဒီတစ်သက်တော့ ကုန်အောင်ဆပ်သွားမယ်။ သူ ဒါကိုမသိလို့မှမဟုတ်ဘဲ။ “ သူငယ်ချင်းရယ် မင်းကို အရမ်းချီးကျူးတယ် ဘယ်လိုစိတ်နဲ့များ ဒီလိုနေနိုင်တာလဲ။ ငါသာဆိုရင် ဘာဖြစ် ဖြစ်ကွဲ ပစ်မှာ “ သူငယ်ချင်းစကားကို ခေါင်းငြိမ့်မိတယ်။ သူမ ကြိုးစားခဲ့တယ်လေ။ တဖက်သတ်ဘဲမမြင်တဲ့ စိတ်က သူမရဲ့ဒေါသကို တားဆီးထားစေတယ်။ မှားခြင်းဆိုတဲ့ အထဲမှာ သူမ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ သူမခင်ပွန်းက တစ်ဝက်တိတိမှားနေခဲ့ပြီလေ… အဲဒီအမှားအတွက် သူတပါး အပေါ်မှာဘဲ အပြစ်ပုံချတာလဲ မလိုချင်… သူမ ကိုယ်တိုင်တဖက်ပေါ်ဝင်ခံစားမိတော့ တဖြေးဖြေးကိုယ်ချင်းစာ နားလည် လာမိတယ်။ သူမရဲ့ ခြေဖ၀ါးမှာ မျက်ရည်တွေ စွန်းပေကျန်ခဲ့သည်အထိ ဒူးထောက် ကန်တော့တောင်းပန်နေတဲ့ ကောင်မလေးက ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် သူမ သားအကြီးလေးနဲ့မှ မတိမ်း မယ်ိမ်းဖြစ်မလားဘဲ။ ဒီဝဲဂယက်ထဲကို မင်းဘယ်လိုများကရောက်ခဲ့တာလဲ… သူမက “ မင်းအကို့ကို တကယ်ချစ်ခဲ့သလားဆိုတော့ “… ဘာမှ မဖြေနိုင်ဘဲငိုနေတယ်။ သူမ စိတ်ပူတာက ဒီကောင်မလေးမှာ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ချစ်သူရှိ နေမှာကိုပါ။ နောက်တော့ မရှိမှန်းသိရတယ်။ မိန်းကလေးရဲ့ အဖြေမှာတော့ နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်ခဲ့လို့မဟုတ်ဘဲ တဒင်္ဂရဲ့သာယာမှုက ဖမ်းစားလိုက်တာဘဲ။ နံရံပေါ်က စာသားလေးဆီ အကြည့်ရောက်သွားမိ ပြန်တယ်… “ ကမ္ဘာကြီးအတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်နေတာက မေတ္တာတရားပါ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ ဂရုဏာတရားပါ လူသားအချင်းချင်း နားလည်သည်းခံမှုနဲ့ ချစ်ခင်လေးစားမှုပါ။ ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံပြီ အများအကျိုး ဆောင်သယ်ပိုးတဲ့ ပရဟိတစိတ်ဓါတ်ပါ။ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ထဲက ဆရာမကြီးလူထုဒေါ်အမာ ပြောခဲ့တဲ့ စကားကို ကပ်ထားတာ။ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုတွေ အများကြီး။ ဒီအထဲမှာ သူမဟာ အတ္တတွေနဲ့ ဆာလောင်နေတဲ့ သူမဖြစ်ချင်ဘူး။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ သူမ လူသားအချင်းချင်း စာနာ နားလည်မှုကို ဘယ်လောက်ရခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အရည်အချင်းကို စစ်တဲ့စားမေးပွဲကို ဖြေခဲ့ရသလိုဘဲ။ အဲဒီအတွက် သူမ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပတ်ဝန်းကျင်က အပြစ်တင်ချင်တင်ကြလိမ့်မယ်။ သူမရဲ့ စိတ်တွေ ဖြေလျော့ဖို့ တစ်ခုတည်းသောအားက စိတ်ဓါက်ပင်။ ဒါပေမဲ့ ဟန်ဆောင်နေတဲ့ စိတ်တော့မဟုတ်၊ ပင်မစိတ်ကိုက ကောင်မလေးကို ကိုယ်ချင်းစာသနားလာခဲ့တယ်။ ဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ ကြားထဲ သူမရဲ့ မျက်နှာတောင်မကြည့်ဝံ့တဲ့ ကောင်မလေးကို ပိုးဆိုးပတ်စက်ပြောဖို့ စိတ်ဆင်းရဲအောင် လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေက သူမလက်ထဲမှာ သူမ ခင်ပွန်းအပေါ်မှာလည်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရနိုင်သေးတာဘဲ… ဆုံးရှုံးခြင်းကို မှားယွင်းခြင်းလို့ မထင်ချင်ပါဆိုတဲ့ သီချင်းစာသားလေးအတိုင်း ဒါကို အမှားအယွင်းကြီး တစ်ခုလုိ့မထင်ချင်တော့ပါဘူး။ ပင်ပန်းလွန်းလှတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ၀န်ခံခိုင်းလည်း တစ်ခုဘဲရှိတော့တယ်။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ပြင်ထားပြီးပြီလေ…( ၃ ) ဒီကိစ္စကို သားနှစ်ယောက်သာ သိသွားရင် သူတို့လေးတွေကို ခံစားရမှာစိုးတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေက နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ကြီးစိုးနေခဲ့တယ်။ တကယ်တမ်းသိသွားတဲ့ အချိန်မှာ သားတွေလည်း ဘူမကို ခံစားရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်အံ့သြစရာကောင်းသလဲဆိုရင် သူတို့က သူမကို အင်မတန် နှစ်သိမ့်တတ်ပြီး သူ့အဖေအပေါ် အထင်သေးခြင်းမရှိဘဲ တစ်ဖက်မိန်းကလေးကိုတော့ စာနာတယ်တဲ့။ သူမကိုတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး သားနှစ်ယောက်က မျှော်လင့်ချက်မဲ့မသွားစေခဲ့ဘူး။ အံ့သြစရာ သားတွေကပဲ သူမနဲ့တူနေခဲ့သလား။ သူမ မဖြစ်စေချင်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုမဟုတ်လို့ ရင်ထဲမှာ ၀မ်းသာမိတယ်။ သူမကိုလဲ… “ အမေ အဖေနဲ့ မကွဲပါနဲ့ ကွဲစရာမလိုပါဘူး “ တဲ့ သားရဲ့ ကတိအထပ်ထပ်တောင်းဆိုမှုမှာ ကောင်းပါပြီဆိုပြီး ကတိပေးလိုက်ရတယ်။ “ အဖေက အမေ့အပေါ်မှာ အနိုင်ယူနေသလား “ တဲ့ သားငယ်ကမေးတယ်။ ဟင့်အင်း သူဘာမှ အနိုင်ယူလို့မရတဲ့အပြင် အခြားအရာတွေကိုတောင် လိုက်လျောပေးနေရသေးတယ်။ “ သားတို့နဲ့ အဖေတူ အမေကွဲ ကလေးတစ်ယောက် ရောက်လာတော့မယ် “ ဆိုတော့ … “ ဟင် ဟုတ်လား အမေ။ ညီမလေးဖြစ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲ “ “ သားက ချစ်မှာလား “ ဆိုတော့ “ ချစ်မှာပေါ့ အဖေသွေးဘဲ “ လို့ မဆိုင်းမတွဖြေတယ်။ တက်ကြွတဲ့လေသံတောင် ပါနေတဲ့ သားအသံက သူမအတွက် ခါးသီးစရာမဟုတ်ခဲ့တာတော့ သေချာပါတယ်။ အရင်က သူတို့ပြောဘူးတယ်။ အမေ ညီမလေးတစ်ယောက်လောက် မွေးပေးစမ်းပါတဲ့။ သူမ မမွေးတော့ဘူးဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ပဲသိတာမို့… ပြုံးရုံသာပြုံးနေလိုက်တယ်။ သူတို့မျှော်လင့်နေတာကိုတော့ ဒီအတိုင်းလေးဘဲ ရှိစေချင်တယ်။ သူမဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို သားအဖေနဲ့သားတို့အတွက် မမွေးပေးနိုင်တာသေချာတယ်။ အဲဒီအတွက်တော့ ၀မ်းနည်းသလိုခံစားရတယ်။ တကယ်တမ်း ဒီနေ့လိုနေ့မျိုးမှာ တိတ်ဆိတ်မှုက ပိုကြီးစိုးနေသလို ခံစားလာရတယ်။ အိမ်မှာ သူမတစ်ယောက်တည်း… ဒီနေ့ သားတို့ရဲ့အဖေဆီက ဖုန်းရပြီး တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သိပ်မကြာခင်မှာ သားဆီက ဖုန်းဝင်လာလုိ့ ပြောပြလိုက်တယ်။ သားကြီးက “ အမေ အခုဘာလုပ်နေလဲ ဘယ်လိုခံစားနေရလဲ သားနားလည်ပါတယ် အမေ “ တဲ့။ သားကြီး အမေးကို မဖြေနိုင်ခဲ့ဘူး။ တကယ်တမ်း သူမဘာလုပ်နေခဲ့သလဲ ဆိုတာတောင် မသိ ထိုင်ပြီး အတွေးတွေထဲ သံသရာလည်နေတယ်လို့ ထင်တယ်။ ထိုင်ပြီးတွေးနေခဲ့တာ အတော်တောင်ကြာသွားပြီ။ သူမရဲ့ ညာလက်ထဲမှာ မေ့ပြီးဖုန်းကိုတောင် ကိုင်ထားတာ ဘယ်လောက် အချိန်တွေကြာသွားခဲ့ပြီလဲ။ သူမ အ၀တ်အစားလဲပြီး အိတ်တစ်ခုကို အဆင်သင့်ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ အဲဒီ အိတ်ထဲမှာ သားတို့တုန်းက အသုံးပြုတဲ့ မဟောင်းသေးတဲ့ အနှီးတွေနဲ့ … သားငယ်လေးရဲ့ အကျီင်္တစ်ချို့ကိုထည့်လိုက်တယ်။ သားတို့နဲ့ပတ်သက်သမျှကို အကုန်ထ်ိန်းသိမ်းထားခဲ့တယ်။ အနှီးလေးရဲ့ အောက်ခြေမှာ နာမည်လေးတွေထိုးထားသေးတယ်။ ဆေးရုံ ဓာတ်လှေကားနဲ့မတတ်ဘဲ လှေကားထစ်တွေအတိုင်း တတ်ခဲ့တယ်။ ခြေလှမ်းတွေက ရင်ခုန်သံတွေနဲ့အတူ အကိုပြောထားတဲ့ အခန်းနံပါတ်ရှေ့အရောက် သူမလှေကားတတ်လာတဲ့အရှိန် ပိုမောနေခဲ့ပြီ။ တံခါးလက်ကိုင်အဖုလေးကို အဖွင့် တစ်ဖက်ကလဲ အဖွင့်မို့ သူမနည်းနည်း လန့်ပြီးတော့တောင် တုန်သွားတယ်။ အစ်ကို… သူ မအိပ်ရဘူးထင်တယ်။ မျက်ဝန်းတွေတောင်ချောင်လို့။ ဟုတ်မှာပါ သူမ မွေးတုန်းကလည်း သားတွေကို မအိပ်ပဲ ပြုစုနေခဲ့တာ အကြောင်းမကြားဘဲ ရောက်လာတော့ သူကလည်း ရုတ်တရက် အံ့သြသွားဟန် အထင်သားမျက်နှာမှာ မြင်လိုက်ရတယ်။ အစ်ကို့ မျက်နှာက တစ်မျိုးဘဲ… သူမ လာတာကို မကြိုက်တာလား မဖြစ်နိုင်ပါ… အခန်းထဲရောက်တော့ ကုတင်ပေါ်မှာ ဖျော့တော့စွာ အိပ်နေတဲ့ မိန်းကလေး ။ သူမ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကလေးလေးကို ရှာနေမိတယ် မတွေ့။ မိခင်နဲ့အတူ ရှိနေရမဲ့ ကလေးလေးက ဘယ်မှာလဲ။ အစ်ကို့ မျက်နှာကို ကြည့်တော့ သေချာပေါက် မျက်နှာပျက်နေတယ်။ အစ်ကို ဘာဖြစ်တာလဲ “ ကလေးရော ဟင် “ အစ်ကိုက သူမလက်ကိုဆွဲတယ်။ အခန်းထောင့်လေးထဲမှာ သူမနဲ့ အနီးဆုံး မျက်နှာနားထိုးကပ်လာပြီ “ သမီးလေးက… ကုလို့မရတဲ့ မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါပါလာတယ် ပေါင်ချိန်လဲမပြည့်ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နာရီလောက်က အရေးပေါ်အခန်းထဲမှာဘဲ အသက်မရှိတော့ဘူး “ “ အို “ သူမ ကြားကြားချင်း အံ့သြသွားတယ်။ “ အို ဘယ်လိုများဖြစ်ရတာလဲ “ “ သူ့အမေကလည်း မွေးအားသိပ်မရှိဘူး အခုသူအိပ်ပျော်နေတာ နှစ်နာရီလောက်ရှိပြီ။ ကိုယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲ မသိဘူး။ ကိုယ့်သမီးလေးကို အရမ်းနှမြောတာဘဲ … နောက်ပြီးလေ ကိုယ်တစ်ချိန်လုံးထိုင်စဉ်းစားနေမိတယ်။ “ မိုး “ ဆီက ရတဲ့ နားလည်မှုတွေအားလုံး အတွက်ရော ကျေးဇူးလည်းတင် ၀မ်းလည်းသာခဲ့မိတယ်။ အစ်ကို့ကို မိုး မေတ္တာတွေဆူးပြီး ဘုရားက ဒဏ်ခတ်လိုက်သလား လုိ့တောင်ထင်မိတယ် “ အစ်ကို့ရဲ့ လက်တွေကို သူမ ဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။ “ မဟုတ်ဘူး အစ်ကို လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ လူဆိုတာ သူ့ဘ၀ သူ့အကြောင်းနဲ့ လာကြတာ။ အဲဒီလို မယူဆပါနဲ့ မိုး စိတ်မကောင်းဘူး။ ကလေးအမေကိုတော့ မဖြစ်မနေ အသိ ပေးရမယ် “ သူမလက်ထဲက အထုပ်လေးကိုထားပြီး ကလေးလေးကို ကြည့်ဖို့ အစ်ကိုနဲ့ ထွက် လာခဲ့တယ်။ သားတွေနဲ့ ပြောဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကိုတော့ သူ့ကို မပြောဖြစ်တော့။ အခန်းထဲမှာ သီးသန့်လေးရှိနေတဲ့ ကလေးလေးက ခုပဲ လူ့လောကထဲရောက်၊ ခုဘဲ ဘာမှမသိလိုက်ခင်မှာ လူ့ လောကထဲက ထွက်ခွာသွားရတယ်။ အသားလေးက ဖြူနေတယ်။ နှာတံနဲ့မျက်ခုံး၊ မေးစေ့လေးက အစ အစ်ကိုနဲ့ချွတ်စွတ်ဘဲ။ ကလေးလေးရဲ့ လက်လေးကို ကိုင်ကြည့်ရင်း ရင်ထဲမှာ စိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့။ လူ့ဘ၀ထဲကို လာခွင့်မရသေးတဲ့ သူလေးအတွက်အစ်ကိုနဲ့ သူမ အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးဖို့ မျှော်လင့်တယ်။ “ ချစ်ရမှာပေါ့ အဖေ့သွေးဘဲ… ညီမလေးတဲ့လား… ခွင့်ရရင်ပြန်လာမယ်၊ အဲဒီအချိန်လောက်ဆို ညီမလေးလည်း ကြီးနေလောက်ရောပေါ့… သူကြီးလာရင် သားတို့ တာဝန်ယူတယ် ပညာသင်ပေးမယ်… ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ အမေ အဖေ့ သွေးဖြစ်နေတဲ့အတွက် လက်ကမ်းကြိုဆိုလိုက်ပါ… “ သားရေ အမေကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်နော်… သားတွေရဲ့ စကားသံကို ပြန်ကြားနေမိတယ်။ အစ်ကိုက သူ့သမီးပါးလေးကို တစ်ချက်ငုံ့နမ်းရှိုက် လိုက်တယ်။ အပြင်မှာ မိုးတွေတစ်ဖွဲဖွဲ ကနေ တစိမ့်စိမ့်ရွာလာတယ်။ အစ်ကိုရော သူမရင်ထဲမှာ တစ်စိမ့်စိမ့်ရွာနေတယ်။ အပြင်မှာရွာတဲ့ မိုးတွေက ရင်ထဲ အတွင်းမှာ ရွာနေတဲ့ စ်ိမ့်မိုတွေလောက် မသည်းထန်နိုင်လောက်ဘူး ထင်ပါရဲ့။ စကားသံတွေ တိတ်ဆိတ်လို့… အခန်းရှေ့အရောက်… ခြေလှမ်းတွေ ရုတ်တရက် ပြိုင်ရပ်သွားတယ်… သူရော သူမရော မတိုင်ပင်ရပဲ… ပြိုင်တူ လမ်းခုလတ်မှာ အကြည့်ချင်းဆုံသွားတယ်။
Mandalay Icon Magazineချောအိမာန် (မန္တလေး )